Miatrika fanadihadiana ilay mpanoratra Maleziana rehefa avy namoaka boky momba ny fanapaha-keviny tsy hitafy hijab · Global Voices teny Malagasy
Mety hiditra am-ponja izy raha voampanga sy meloka.
Voadika ny 19 Novambra 2019 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, čeština , Italiano, Español, Nederlands, Esperanto , bahasa Indonesia, Deutsch, English
Nohadihadian'ny manampahefana ara-pivavahana ilay mpanoratra Maleziana Maryam Lee taorian'ny famoahana boky mitantara ny fanapahan-keviny hitsahatra tsy hitafy hijab na ilay sarondoha entin'ny vehivavy Miozolomana marobe.
Mino i Maryam fa misy hifandraisany amin'ny bokiny, Unveiling Choice (Safidy tsy Hisarom-boaly), izay navoaka tamin'ny fiandohan'ity taona ity ary manazava ny hevitry ny ‘dehijabbing’ ny fampiantsoana azy. Nanjary niteraka adihevitra ny famoahana ity boky ity rehefa nanome baiko tamin'ny fanaovana fanadihadiana momba ny hetsika ny Departemantan'ny Praiminisitra misahana ny Raharaham-pivavahana.
Manana vahoaka maro Miozolomana i Malezia ary fantatra amin'ny fampiroboroboana ny fomba fijery mahay mandanjalanja momba ny finoana Islamo tohanan'ny lalàna tarihin'ny fitsipiky ny firindrana ara-pirazanana sy ara-pinoana. Saingy tato anatin'ny taona vitsy dia nisy ireo hiringiriny sasany izay nanery ny fampiharana hentitra ny fampianarana ny Islamo amin'ny fitantanana. Hita taratra tamin'ny didy navoakan'ny Fitsarana Ambony tamin'ny volana Aogositra 2019 izay nankatoa ny fahefan'ny Fitsarana Shariah hamoaka ny fatwa hanoherana ny Sisters in Islam, vondrom-behivavy manohana ny miralenta ihany koa ny famerana ny fanehoan-kevitra ara-pinoana .
Nanao antso ho firaisankina i Maryam nandritra ny nanatrehany fanadihadiana :
Nilaza ny Vondrona Miara-Miasa ho an'ny Miralenta, fiaraha-mientana ao amin'ny fikambanana miisa 13 mpiaro ny zon'ny vehivavy ao Malezia fa mampiroborobo ny fampandrosoana ny vehivavy ny bokin'i Maryam:
Nanamarika ny Hetsika Maleziana ho an'ny Rariny sy ny Firaisankina fa ny JAIS no manevateva ny Islamo:
Niaro ny zon'i Maryam amin'ny fahafahana maneho hevitra malalaka ny New Naratif, tranonkalam-baovao tsy miankina mitantara momba an'i Azia Atsimo Atsinanana:
Mpitarika ny fiarahamonim-pirenena marobe ao amin'ny faritra ihany koa no nanao sonia fanambarana iray milaza ny ahiahiny momba ny fiampangana an'i Maryam: